Ukugcwalisa umthamo omncane kanye ...
Semi okuzenzakalelayo ilebula flat ...
Semi Auto Capsule Ukugcwalisa M ...
Imboni ye-BRENU enobuchwepheshe obuthuthukile nomthamo oqinile we-R & D, isibe ngumholi emakethe yokupakisha kanye nomlingani ohamba phambili ofakazela ukukhishwa kwekhwalithi nokwenziwa emhlabeni wonke kwemishini yokugcwalisa, imishini yokufaka, imishini yokufaka ilebula, umshini wokupakisha, ukuhambisa nezinhlelo zokupakisha eziphelele, ngaphandle kokuqhubeka okuphezulu ukukhula, ikhwalithi ephezulu kanye nenani eliphakeme lokugcwalisa, i-capper ne-labeler, i-BRENU ikhulise ibhizinisi layo laba yisisombululo esiphelele somugqa wokukhiqiza wezimonyo, ukudla, okwelapha, ukunakekelwa kwasekhaya, uwoyela we-lube nokunye.
Ngesikhathi se-COVID, akulula ukuvakashela noma iyiphi indawo ngokukhethekile eza eChina, kepha i-inthanethi ingakusiza nonke, sinikezela ngombukiso wevidiyo ongu-360 °. xoxa nokuxhumana. singasayina inkontileka nge-inthanethi. Ngemuva kokuthi imishini isiqedile singayihlanganisa sithathe ividiyo, futhi siyithumele kuwe, ekugcineni uma uthola ividiyo kuzoba lula ukwazi ukuthi ungahlangana kanjani futhi usebenze kanjani.
UKUGCWALISA IMISHINI KUSASA
Imishini yokugcwalisa isetshenziswa kakhulu embonini yokudla, imboni yeziphuzo, imboni yamakhemikhali yansuku zonke, njll. Ukuncintisana kwemishini yokupakisha ukudla kuya ngokuya kuba nolaka. Imishini yokugcwalisa yesikhathi esizayo izobambisana nemishini ezisebenzelayo ukukhuthaza ukwenziwa ngcono kwelev ...
Ibhizinisi Eliphansi Lezindleko Zasekhaya- Umshini Wokugcwalisa Amanzi
Imishini yokugcwalisa isetshenziswa kakhulu ekufakweni kokudla, amakhemikhali ansuku zonke, imithi, njll. Ngokuthuthuka komnotho, ukuguqulwa kwezimakethe, kanye nokuthuthuka kubuchwepheshe bokukhiqiza, ukuthuthukiswa kwemishini yokugcwalisa kukhombisile nezindlela ezahlukahlukene. Ukugcwalisa imishini kuyinto ku ...
Uyemukelwa uNyaka Omusha WamaShayina!
Isikhathi samaholide sonyaka omusha waseChina. Isikhathi sosuku lwamaholide sonyaka omusha wase-China sizoqala kusuka ku-FEB9-17TH 2021, izifiso ezinhle kakhulu ezivela e-China BRENU, "GONGXIFA CAI" unyaka omusha omuhle kubo bonke abangani abasegameni ngonyaka we-OX, ufisela bonke abangane njenge-OX inhlanhla yansuku zonke! ngonyaka omusha, imboni yethu g ...
Umshini Wokugcwalisa Okubaluleke Kakhulu Kuwe!
1.Ungawukhetha kanjani umshini wokugcwalisa? abathengi abaningi bafuna ukuqeda ukugcwalisa, kepha abazi ukuthi bangawukhetha kanjani umshini wokugcwalisa olungile, ukukhiqizwa kokungafani nomlingiswa owehlukile. Yiluphi uhlobo lwemikhiqizo olugcwaliswayo? wamukelekile usazise igama, usibonise isithombe nevidiyo, noma uthumele ...